Ndepụta nke ebe nlegharị anya kachasị mma na Buenos Aires | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Argentina, Buenos Aires, Ihe ị ga-ahụ
Buenos Aires bụ otu n'ime obodo ndị mara mma na Latin America. O nweghi oke mara mma nke Lima, ịma mma nke ọdịdị Rio ma ọ bụ akara ọdịnala siri ike nke Mexico City, ma o doro anya na ọ bụ obodo dị mkpa. Buenos Aires abụghị onye ọchịchịỌ bụ ada nke mbata na ọpụpụ nke Europe na nke a na-ahụ n'okporo ámá ya, ụlọ ya na ụdị ndị ya.
Buenos Aires bụ obodo ọdịiche n'ihi na n'otu oge ahụ ọ bụ obodo Latin America ebe enwere akụ na ụba na ịdị mma dịka enwere ịda ogbenye na enweghị ntụkwasị obi. Ka o sina dị, jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ America, Ọ bụ obodo nchekwa nke ahụ maara otú e si anabata ndị ọbịa ma nwee ọtụtụ ebe nkiri na-eme ka ọ bụrụ obodo a na-agaghị echefu echefu. Ana m ahapụrụ gị ihe kacha mma njem nleta na Buenos Aires.
1 Lonlọ ihe nkiri nke Colon
3 Ebe a na-eli ozu Recoleta
5 Corrientes Okporo ụzọ
6 Ngosi ihe mgbe ochie na Buenos Aires
7 Palermo Soho na Palermo Hollywood
8 Port nke Madero
Este Ọ bụ otu n'ime ihe nkiri opera na ballet kachasị mkpa n'ụwa n'oge na-adịghịkwa anya, ọ nweela nnukwu mweghachi, nke taa nọ na ọkwa nke abụọ ya. Ọ gbanwere otu narị afọ na 2008 ma dị n'etiti obodo ahụ. O nwere ihe karịrị puku mita asatọ, puku ise n'ime ha bụ nke etiti ụlọ na ihe karịrị puku atọ nọ na okpuru ulo na-agbakwunyekwu square mita na ngụkọta nke ụlọ ọrụ ahụ.
Halllọ nzukọ na-eme ihe nkiri nwere igbe ndị dị na ala nke atọ na elu 28 mita. Ọ nwere ikike maka 2.478 nọ ọdụ na ndị na-ekiri 500 na-eguzo. Dome ya dị mita mita 318, ebe a dị mita 35 n'obosara site na 25 miri na 34 dị elu. Na mgbakwunye, o nwere nkuzi nke ya ma na-arụ ọrụ n'ime ụlọ akwụkwọ balet mara mma. Enwere njem njegharị ụbọchị ọ bụla site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede wee banye site na ngafe njem ochie, Tucumán 9.
Ọ bụ ụlọ ndị isi ala ma dị na Plaza de Mayo, ebe ememme na ngagharị iwe niile na-eme ka ọha na eze Argentina jupụta. Ọ bụ isi ụlọ ọrụ nke National Executive Power Ọ dị na saịtị ebe ewusiri ike nke gọvanọ mbụ wuru na mbata nke oge ọchịchị, n'akụkụ mmiri nke Río de la Plata, na narị afọ XNUMX.
Ọ nwere Nleta eduzi nke na-enye ohere ịmara ime ụlọ ya, veranda ya na ogige ya. Taa ndị Bicentennial Museum, narị afọ abụọ nke nnwere onwe Argentine na-eme ememe na 2010, saịtị ị nwere ike ịga na Wednesday ruo Sunday na ezumike, site na 10 ruo 6 elekere. Nleta ahụ gbakwụnyere site na ịgagharị na square ahụ, nke Katidral nke Buenos Aires nke dị n'akụkụ ya na Cabildo, bụ isi obodo nke akụkọ ihe mere eme.
Ebe a na-eli ozu Recoleta
Ọ bụ ebe a na-eli ozu kasị ochie n’obodo a ma ọ na-eme ka ọ na-etinyekarị ya ili na vaults nke ezinụlọ patrician si n'obodo. Ọ dị obere ma dị na agbata Recoleta, nke kachasị ọnụ na Buenos Aires. N'ihu ya, e nwere otu square na ngwụsị izu na-enweta ihe ngosi mara mma na etiti maka ebe a na-eme gastronomic. A na-achọ mma ili nke oligarchy mpaghara ọrụ nka nke bara nnukwu uru, mabul awụ, iron ọrụ, nke meela ili a ka ọ bụrụ ụdị ebe ngosi nka.
Enwekwara ili nke ndi di nkpa na onodu ochichi na nke omenala: lee ya ili nke Eva Perón, dịka ọmụmaatụ, na kwa nke ndị isi na ndị agha. Enwere Nleta eduzi n’asụsụ dị iche iche. Anaghị m akwado ịga ụbọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'ihi na enweghị ndò ebe ọ bụla. Njegharị ahụ nwere ike ịkwụsị na chọọchị nke dị n'akụkụ ebe a na-eli ozu, ochie, na iri ihe ụfọdụ n'ime ụlọ nri ndị dị nso.
San Telmo na-bụ ọmarịcha agbata obi nke Buenos Aires na nwere ochie ụlọ, warara n'okporo ámá, ụlọ oriri na ọ barsụ ,ụ, Ogwe nile di iche iche na a square na ọ bụla izu ụka ụlọ a crafts na antiques ngosi ezigbo njem nleta. Ogige ahụ gbara gburugburu ụlọ nri yana n'okporo ámá ndị gbara ya gburugburu enwere ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo ebe iji nwayọ na-eje ije, ịzụ ahịa, rie, see foto ma nwee mmetụta nke oge ochie nke obodo nke n'akụkụ ndị ọzọ na-ekpughe na ọ bụ oge a.
Corrientes Okporo ụzọ
Corrientes uzo bu n'okporo ámá nke na-adịghị ehi ụra. Nwere ọtụtụ ihe nkiri na-arụ ọrụ n'afọ niile, n'ezie Buenos Aires bụ otu n'ime obodo nwere ọtụtụ ihe nkiri na Latin America. E nwekwara ụlọ oriri na ọizụ pụ na pizzerias ma ọ bụ ezie na ha dị ole na ole, ọtụtụ eji akwụkwọ ahịa na ụlọ ahịa ahịa, ụlọ ahịa ndekọ na ụfọdụ ụlọ ahịa akwa akpụkpọ anụ ha nọ ebe ahụ maka ndị njem nleta.
Ga-agabiga Corrientes n'abalị wee rute ebe Obelisk dị, Avenida 9 de Julio, iji nwee ezi echiche banyere etiti obodo ahụ. Ndụmọdụ m bụ iri pizza na-eguzo ọtọ, enwere ebe ngosi dị n'akụkụ ebe a.
Ngosi ihe mgbe ochie na Buenos Aires
Buenos Aires nwere ọtụtụ ihe ngosi nka. Enwere Museumlọ ihe eji egwu nka achọ mma na-arụ ọrụ na ọmarịcha obí eze site na mmalite narị afọ nke XNUMX, ndị National Museum nke Ọma Arts ebe i nwere ike inwe ekele maka Argentine sere na MALBA, Museum nke Latin American Art.
I nwekwara ike ileta Ebe ngosi nka nke Evita, na mpaghara Buenos Aires nke Ogige, ebe a ga-enwe ụlọ maka ụmụ nwanyị. Nke a bụ ngosipụta na-adịgide adịgide nke ihe Eva Perón na ezigbo ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ.
Palermo Soho na Palermo Hollywood
Ruo ugbu a anyị enyochala nke kachasị ochie nke Buenos Aires nke dị na mana ọ karịrị afọ iri na ise enweela Ebe obibi Buenos Aires nke toro ọtụtụ: Palermo. Tupu ọ bụ agbata obi dị jụụ nke obere ụlọ, nwere oke osisi, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ gara aga mmepe gastronomic na-enweghị atụ malitere na ụlọ ochie na-aghọ Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ nke na-emeghe ma na-emechi oge niile.
Na Palermo Soho na akwa ákwà, akara mba na ndị na-emepụta onwe ha. E nwekwara ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ụlọ mmanya na-emeghe n'isi ụtụtụ ma na-emechi n'isi ụtụtụ. N'akụkụ bụ Palermo Hollywood, gafee Avenida Juan B. Justo, e nwere ụlọ mmanya na ụlọ nri na ụlọ ahịa akwa pere mpe. Emeela Hollwood baptizim n'ihi na osisi osisi a na-ahụ anya dị ebe a na enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta nke otu narị na telivishọn.
Dịka ndị njem nleta, anyị nwere ike itinye uche na Palermo Soho. Obi bụ Plaza Serrano. Otu eziokwu: uwe adịghị ọnụ ala, ọbụlagodi na mgbanwe.
Port nke Madero
Puerto Madero bụ ebe ụlọ nkwakọba ihe ochie, n'ofe Osimiri. Enwere ọtụtụ ala sitere na Río de la Plata na N’ime ụlọ nkwakọba ihe ochie na ụlọ nkwakọba ihe taa enwere ụlọ nri, ọfịs na ụlọ nkwari akụ. Ọ na-enye ezigbo ijegharị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iri nri na-ele ụlọ elu igwe nke na-egosipụta na mmiri nke osimiri ahụ, ọ bụ ezigbo ebe. Ọzọ bụ Clublọ Ndị Na-akụ Azụ̀, nke dị n'ógbè ọdụ ụgbọ elu obodo, na njedebe nke ọdụ ogologo nke na-aga n'ihu na mmiri na-acha aja aja nke nnukwu osimiri a. N'ezie, ị ga-ewere tagzi wee pụọ na mpaghara Puerto Madero mana ọ bụ ahụmịhe dị iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Argentina » Ebe nkiri kachasị mma na Buenos Aires
Buenos Aires, ọ bụrụ na ọ nwere akụkụ nke colonial ya, n'ihi na ọ bụ n'ezie ógbè, mana o doro anya na ị maghị ya ma ọ dị ka akụkụ buru ibu nke obodo ahụ efuola.
Zaghachi Avi Díaz